Ogaden News Agency (ONA) – Wabiga Nile iyo dacaayad siyaasdeed ee Itobiya iyo Masar
Wabiga Nile iyo dacaayad siyaasdeed ee Itobiya iyo Masar
Waxaa maalmahan ka dhex socday Masar iyo Itobiya dagaal saxaafadeed oo ka bilowday markay Itobiya ku dhawaqday inay bilowday leexinta marinkii wabiba Blue Nile oo biyaha wabiga Nile inta ugu badan ay soo maraan. Arintaasi waxay kicisay umadii Masar shacab iyo xukuumadba, sababtoo ah siduu sheegay M/weynaha Masar Dr. Mursi; Masar waa Wabiga Nile, isagoo sii daba dhigay dhiiganaga ayaan u hureynaa hadii biyaha Nile uu is-dhimo.
Xukuumadda Masar gaar ahaan intuu xukunka qabtay xisbiga Akhwaanka uu madaxda ka yahay, waxaa hadheeyay kacdoono aad u gilgilay dalkaa oo shacabka u kala qaybiyay laba qaybood oo habayaraatee aan lahayn maslaxad ka dhexeysa oo kulmin karta. Talaaba kasta oo xukuumadda ay dhanka fiican u qaado mucaaradka waxay u arkayeen inay faa’iido siyaasi ah u keeneyso xisbiga talada haya ee Akhwaanul-Muslimiin, sidaa daradeed iyagoon meel kalaba ka eegin ayay u xusul duubayeen inay ka hortagaan oy burburiyaan. Sidoo kale xukuumadda iyo xisbiga talada haya. Arintaasi waxay keentay in maslaxadii iyo haybadii uu dalkaa lahaa lunto, sawirkii laga haystay Masar ee ahaa inay tahay dalka ugu xooga badan Afrika ay halkaa ka baxdo.
Markii Itobiya ay ku dhawaaqday leexinta Majarihii wabiga waxay u aragtay xukuumadda iyo xisbiga talada haya inay tahay fursad ay ku mideyn karaan shacabka oy ku kasban karaan mucaaradka gaar ahaan iyadoo aan ogsoonahay inuu mucaaradka ka soo horjeeda Dr. Mursi ay diyaarinayaan banaabaxyo aan dalka horey ugu dhicin dhamaadka bishan oo ah sanadguuradii 1aad ee doorashada Dr. Mursi. Habka ay xukuumadda u soo bandhigtay sidii looga hortgai lahaa khatarta ku soo fooleh Masar ee Biya xidheenka Itobiya wuxuu noqday mid aad u liita oo gude iyo dibadba aan qancinin. Waxaaba ka sii daran inuu muujiyay khashiinimada xukuumadda ka dib markii si Live ah looga daawaday TV-yada shirkii wada-tashiga ahaa ee M/weynaha Dr. Mursi uu isugu yeedhay xisbiyada mucaaradka.
Dhanka Itobiya waxay uga faa’idaysatay arimaha ka socda Masar siday doonaysay. Waxaan la soconaa in qudheeda ay u baahnayd inay hesho mashruuc ay mucaardka ka soo horjeeda iyo banaanbaxyada gilgilay Adisababa kaga hortgato. Durbaba waxay xukuumadda EPRDF/TPLF u muuqatay inay tahay xukuumad xoog badan oo diyaar u ah inay difaacdo danaha Itobiya. Waxay shalayba ku dhawaaqday Itobiya inuu baarlamaanka ansixiyay heshiiskii Entebe ee dawladda Masar iyo Sudan ay diideen inay saxiixaan. (Akhri)
Mucaaradka oo laga filayay inay shacabka u ifiyaan ujeedada dhabta ah ee xukuumadda Wayaanaha ay ka lahayd Biya-xidheenka ayaa ku dhici kari waayay inay muujistaan mawqif ka soo horjeeda mawqifka xukuumadda Wayaanaha. Waxay sidoo kale xukuumadda Wayaanaha uga faa’idaysatay inay dawladaha Afrikaanka ah u tusto inay Masar iyo dawladaha Carabta ay ka soo horjeedaan horumarka Itobiya iyo guud ahaan Afrikaanka.
Hadii la is-barbardhigo Itobiya iyo Masar talaaboyinkii siyaasiga ahaa ay qaadeen 2dii todaabd ee la soo dhaafay, waxaan shaki ku jirin inay Itobiya ka guulaysatay Masar dhanka dacaayadda iyo soo bandigidda garta iyo doodooda. Waxaana aad u fashilyay Masar shirkii wada-tashigooda een kor ku soo tilmaanay iyo iyagoon si fiican uga dhaadhicinin caalamka mawqifkooda ku aadan biya qaybsiga wabiga aan ka ahayn inay ku dhaganaadaan heshiiskii boqortooyada Ingriiska iyo boqor Minilkii Itobiya.
Isku soo wada duub, Masar waxaa laga doonayaa inay qaadato mawqif adag oo dareensiiya Itobiya in khasaaraha ka soo gaadhaya uu ka badan yahay faa’iidada ay ka helayso hadaanay wax ka badalin kibirka iyo isla weyniida ka muuqata hadda.